Taageerayaasha Kulmiye oo isu-soo bixi ugu cajiibsanaa abid ka sameeyay magaalooyinka | Xarshinonline News
Taageerayaasha Kulmiye oo isu-soo bixi ugu cajiibsanaa abid ka sameeyay magaalooyinka
Posted by xol2 on June 22, 2010 · Leave a Comment
Hargesa (Nnn)- Xisbiga mucaaradka ah ee KULMKIYE, ayaa maanta isu-soo-bax la yaab leh ka dhigay caasimada Hargeysa, iyada oo Taageraasha xisbiga kulmiye yimaadeen shanta dagmo ee ee caasimada Hargeysa iyaga oo saaran Baabuur uu qaarkood Xisbigu u kireeyay qaar kalena ay iyagu wateen ayaa soo buux dhaafiyay gudaha iyo dibada fagaaraha. waxaanay qaar badan oo Dadkaasi ka mid ahi ay ku labisnaayeen Calamaanta iyaga oo luxayay Calamaantaasi kuna dhawaaqayay Ereyo ay ku muujinayaan Taageerada ay u hayaan Xisbiga Mucaaridka ah ee Kulmiye.
Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee Kulmiye ahna Murashaxa Madaxwaynaha Xisbigaasi ayaa Hadal uu u jeediyay Taageerayaashiisa saaka halkaasi iskugu yimid ayaa waxa uu ka codsaday in ay Nabad gelyada ilaaliyaan si Nabadgelyo ahna iskugu soo baxaan Maalinta Doorashadu ay dhacayso ee 26-ka Juun.
Axmed Siilaanyo, Guddoomiyaha Kulmiye, ayaa mar uu ka jawaabayay Hadal ka soo yeedhay dhawaan Madaxwayne Rayaale oo ahaa in Xisbigiisa dhiishiisu buuxdo kuwa Mucaaridka ahna ay sitaan Weel Madhan ayaa waxa uu arintaasi ku tilmaamay ayaan daro hantida uu ku faanayaana ay tahay Hantidii Ummadu ay ku aamintay ee loo dhiibtay.
waxa isaguna halkaasi ka hadlay Xoghayaha Arimaha diabada Xisbiga Kulmiye Dr. Maxamed Cabdillahi Cumar waxaanu sheegay in maanta ay si wayn hoos ugu dhacday sumcadii ay Somaliland ku lahayd Beesha Caalmka taana ay sabab u tahay Xukuumada Madaxwayne Rayaale. waxaanu ugu baaqay in ay Xisbiga Kulmiye u codeeyaan.
sidoo kale, waxa iyaduna halkaasi hadal ka jeedisay Guddoomiyaha Garabka Haweenka Marwo Canab Cumar ILeeye, waxaanay ugu baaqday shacab waynaha Reer Somaliland in ay Codkooda siiyaan Xisbiga Kulmiye, iyada oo si wayn ugu Mahadnaqday dhammaanba ka soo qayb galayaasha ah Taageerayaasha Xibiga.
Fannaaniinta Xasan Gannay, Dacar, Basbaas, Jaamac Baqayo, Bulshaawi, Ubax Fahmo, Sahra Ilays iyo kuwo kale oo badan ayaa iyaguna maanta fagaaraha Beerta Xorriyada ku soo bandhigay Bandhig Suugaaneed aad loola dhacay oo Nuxurkiisu ahaa in ay Bulashadu doorkan Hogaanka u dhiibtaan Xisbiga Kulmiye. iyaga oo halkaasina ku soo bandhigay Heeso Guubaabo ah oo arintaasi la xidhiidha.
Geesta kale, Guddoomiyaha Xisbiga Mucaaridka ah ee Kulmiye ayaa isaga iyo Wafdi uu Hogaaminayaa ay u ambo baxeen Magaalada Salxley si ay ugu soo khudbadeeyaan Taageerayaasha Xisbiga kulmiye ee Deegaankaasi. sidoo kale, Marwada Guddomiyaha Kulmiye Marwo Aamina Warsi Jirde ayaa iyaduna wafdi ay hogaaminaysaa waxa ay u ambo baxeen Deegaanka Jaleelad oo ay dhalasho ahaan ka soo jeedo si ay halkaasi ugula hadasho Taageerayaasha Xisbiga Kulmiye.
Waa Maalintii ugu danbaysay ee Xisbiga Kulmiye uu u lahaa isku soo baxa Ololaha Doorashada oo ay maalin kali ahi ka hadhsan tahay.waxana maalinta bari ah soo xidhmi doonaa isku soo xidhmi doona isku soo baxa Doorashada iyada oo uu soo gunnaanadi doono Xisbiga Mucaaridka ah ee Ucid. waxana sidaa lagu soo gaba gabayn doonaa Mudada ololaha oo soo socotay 21 Maalmood, Xisbi kastaana uu u lahaa Todoba maalmood isku gayn guud. intaa ka dib waxa la sugaaba waa u dareerida Doorashada oo guddida Doorashooyinku ay u asteeyeen in ay qabsoonto 26-ka Bishan aynu ku jirno ee Juun oo ku beegan Maalinta sabtida ah ee horaanta tododaabkan soo socda.
← Dahabshiil oo Shahaadooyin Guddoonsiiyay 43 ka mid ah Madaxda Gobolada Dalka Ee Shirkadaasi
Saadaasha Doorashooyinka Somaliland →